Tarsan oo kasii hordhacay go'aanka madaxweynaha? (Muxuu yiri?) - Caasimada Online
Home Warar Tarsan oo kasii hordhacay go’aanka madaxweynaha? (Muxuu yiri?)
Tarsan oo kasii hordhacay go’aanka madaxweynaha? (Muxuu yiri?)
Maxamuud Axmad Nuur Tarsan Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa ka sii hordhacay Go’aanka Madaxwaynaha uu qorshaynayo cida loo dhiibi doona Gudoomiyaha gobolka banaadir.
Tarsan ayaa waxaa uu waayadan dambe uu ka warhayay xanta Suuqa ugu jirta oo ah in Gudoomiyaha la badali doona maadaama Dowlada Cusub ay u baahantahay madax Cusub.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa sheegay inuu ka dagi doono Xilkiisa dhawaan kadib markii uu ka hadlay Dibad bax 15-kii bishaan ee maalintii shalay ahaa lagu taageerayay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu ka hadlay kana cadeeyay inuu diyaar u yahay in xilka uu iska wareejiyo.
Waxaa uu sheegay Maxamuud Axmad Nuur Tarsan inuu soo dhawaynayo cidkasta oo isaga lagu badalayo waqti xaadirkaan.
Gudoomiye Tarsan waxaa toddobaadkan uu waayey kursigii xildhibaanimo oo ay beeshiisu horey u siisay, kaasoo maalintii Talaadada loo dhaariyey Dr, Cusmaan Dufle oo ay isku beel yihiin gudoomiyaha kadib markii uu dhamaaday waqti hal bil ahaa oo horey gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari uu ugu qabtay gudoomiye Tarsan inuu ama baarlamaanka xubin ka noqdo ama ka tanaasulo.
Hadalka Gudoomiyaha ayaa waxaa uu Imaanayaa iyadoo Madaxwayne Xasan uu u fadhiyo arinta badalitaanka Maamulka Gobolka Banaadir